इजी स्विस स्टेक - व्यंजनहरु
कसरी प्राकृतिक तात्कालिक भाँडो छोड्ने
कसरी चुल्हो मा माछा कालो बनाउन
एगप्लान्ट पार्मेसनसँग कुन मासु सेवा गर्ने
इजी स्विस स्टेक
स्विस स्टेक एउटा उत्तम पारिवारिक डिनर हो जुन यसलाई बनाउन सजिलो छ र त चुलीमा वा ढिलो कुकरमा पकाउन सकिन्छ। यस थालमा एक राम्रो टमाटर ग्रेभीमा स्वादिष्ट कोमल गोमांस छ र चामल, चाउचाउ वा न्यानो माटोमा उत्तम रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ!
स्विस स्टेक त्यस्ता भाँसाहरू मध्ये एक हो जसलाई मैले सान्त्वनाका साथ जोड्दछु म आइतबार साँझको बेलुकाको खानाको लागि खाएर बढेको छु, र जसै म ठूलो हुँदै जान्छु, ती व्यर्थहरू मध्ये जुन म चाहन्थें। आजका दिनहरूमा यो पारिवारिक मनपर्ने खाने विकल्प हो। हामी सबैलाई यो अविश्वसनीय स्वादको लागि मनपर्दछ, तर साथै, मेरो परिवारको किराना पसलको रूपमा, म कदर गर्छु कि स्टेकको सस्तो कटौती यति कोमल र स्वादिष्ट भयो!
स्विस स्टेक प्रायः अलमलमा पर्दछ सालिसबरी स्टेक , तर त्यहाँ दुई बीच भिन्नता छ। सालिस्बरी स्टेकलाई ग्राउड गोमांसले बनेको हुन्छ र यसलाई प्याटीमा आकार दिन्छ जबकि स्विस स्टेक वास्तवमै स्टेक हो! सालिसबरी स्टेकमा सामान्यतया गोमांस ब्रोथ आधारित ग्रेभी हुन्छ जबकि स्विस स्टेकमा टमाटर आधारित ग्रेभी हुन्छ।
म यो स्विस स्टेक रेसिपी डच ओभनमा पकाउँछु, तर चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईंसँग छैन भने डच ओभन ! तपाईं यसलाई एक फ्राई pan पनमा पकाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई पकाउनको लागि क्यासरोल डिशमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं cr देखि hours घण्टाको लागि क्रोकको भाँडामा राख्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं कामबाट घर फर्कनुहुन्छ।
तपाइँको स्विस स्टेक तयार गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको स्टीक्सलाई टेन्डराइज गर्न पाउन्ड गर्नुहोस् (मaप्रयोग गर्दछु माललेट शैली निविदा )। तपाईं गोलो वा चक स्टेकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन सामान्यतया मासुको कडा कटौती हुन्छ, त्यसैले टेन्डराइज गर्ने प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण छ।
मलाई विश्वास गर्नुहोस् जब म भन्छु त्यहाँ तातो रात्रि खाना जस्तै कत्ति राम्रो कुरा छैन कि क्रीमरी ग्रेवी को सबै संग एक महान स्टेक स्वादबाट आराम संग प्याक गरिएको छ!
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय3 घण्टा कुल समय3 घण्टा पन्ध्र मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सनस्विस स्टेक एउटा उत्तम पारिवारिक डिनर हो जुन यसलाई बनाउन सजिलो छ र त चुलीमा वा ढिलो कुकरमा पकाउन सकिन्छ। यस थालमा एक राम्रो टमाटर ग्रेभीमा स्वादिष्ट कोमल गोमांस छ र चामल, चाउचाउ वा न्यानो माटोमा उत्तम रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ ½ पाउन्ड गोलाकार स्टेक
▢½ चम्मच पेपरिका
▢½ चम्मच खुर्सानी
▢दुई चम्मच जैतुनको तेल वा आवश्यकता अनुसार
▢दुई प्याज काटिएको
▢दुई गाजर काटिएको
▢१ सक्छ रस संग पासा टमाटर २ औन्स
▢१ सक्छ गाईको मासु १० ओज
▢१ चम्चा वोर्स्टरशायर सस
▢१ चम्चा कर्नस्टार्च वैकल्पिक, तल नोट हेर्नुहोस्
He० डिग्री फ्रिमा ताप ओवन।
मासु मलेटको प्रयोग गरेर पाउण्ड मासु ½ ″ मोटाईमा।
पीठो, पेपरिका, लसुन पाउडर, कालो मिर्च र नुनको स्वादको संयोजन गर्नुहोस्। पिठो मिश्रणमा मासु Dredge।
एक डच ओभनमा मध्यम तातोमा १ चम्चा जैतून तेल तातो। प्रत्येक पक्षमा ब्राउन स्टेकहरू (यदि आवश्यक भएमा थप जैतुनको तेल थप गर्दै)। छुट्याइएको।
प्याज र गाजर भाँडोको तल राख्नुहोस्। खैरो स्टेक्सको साथ शीर्ष।
कोर्नस्टार्च बाहेक बाँकी सामग्रीहरू थप्नुहोस्। कभर र २ ½-hours घण्टा पकाउनुहोस्।
मसिएको आलुको सेवा गर्नुहोस्।
यदि तपाईं बाक्लो टमाटर ग्रेभी मनपराउनुहुन्छ भने, पकाइए पछि भाँडोबाट गोमांस हटाउनुहोस्। १ टेबल स्पून पानीको साथ कन्र्नस्टार्च जोड्नुहोस्। भाँडोमा तरल ल्याउनुहोस्। कोर्नस्टार्च स्लरीमा चलाउनुहोस् र गाढा नहुञ्जेलसम्म चलाउनुहोस्।
क्यालोरिज:9 43,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:२g,मोटो:पन्ध्रg,पागलिएको बोसो:3g,कोलेस्ट्रॉल:१०7मिलीग्राम,सोडियम:6 456मिलीग्राम,पोटासियम:१२१13मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:9g,भिटामिन ए:60 5460०IU,भिटामिन सी:२.5.मिलीग्राम,क्यालसियम:१२मिलीग्राम,फलाम:8.8मिलीग्राम
कीवर्डस्विस स्टेक कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
सालिसबरी स्टेक बर्गरहरू
चीजस्टेक भरिएका मिर्च